Android VS iPhone | My Burmese Blog
Android VS iPhone	On June 6, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Videography	၄ ရက်နေ့ စနေနေ့က ကိုကိုရဲ စီစဉ်တဲ့ Ubuntu, Android & PIC ပွဲမှာ မအဲမွန် က Android စက်ရုပ်လေး ယူလာတာနဲ့ ပေါက်ကရ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကွျန်တော့် ကျောပိုးအိပ်မှာ အမြဲချည်ထားတဲ့ bandanna လက်ကိုင်ပုဝါ စည်းပေးလိုက်ပြီး ရှိတဲ့ 550D နဲ့ အပျော် video ရိုက်ထားလိုက်တယ်။
ဗီဒီယိုကို ကိုရဲအောင်သူ ရိုက်ပေးပြီးတော့ ကွျန်တော်က အရုပ်နဲ့ အိုင်ဖုန်းကို တီးပါတယ်။ မေ့သွားတာ Auto focus မဖြုတ်မိလိုက်တာရယ် manual follow focus လုပ်ဖို့ မေ့သွားတော့ ဗီဒီယိုက စစချင်း စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲ ဖိုးကပ်ဝင်ပြီး ကျန်တာ အောက်တော့ဖိုးကပ်တော့ ဖြစ်သွားတယ်။ သည်းခံပေးပါ အစီအစဉ်မရှိပဲ ပေါက်ကရလုပ်ထားတာမို့ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
funny, Video	One Comment	exiter
ငါတို့ ပုဂံကဟာလေးတွေလည်း editing လုပ်ပြီးတင်ပါဦးဟ …
Your email address will not be published. Required fields are marked *	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Captcha *=3+9Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.	Recent Posts